Kukwira kweSocial uye Mobile Native Ads | Martech Zone
Chitatu, Ndira 15, 2014 Kelsey Washington
Nekuwedzera kuri kuzivikanwa kwemafoni emafoni, vanhu vazhinji vari kushandisa nharembozha yavo kutarisa maakaundi avo emagariro pane avo ematafura. Vatengesi vakangwara vari kutora mukana wekuchinja uku nekuwedzera mari yavo kushambadziro yenharembozha, uye nekubatanidza kwavo kushambadzira zvisina musaruro mune zvekudyidzana kwevateereri vavo nevanozvishambadzira veko.
MuUS gore rakapera, inodarika $ 4.6 bhiriyoni yakashandiswa pakushambadzira pasocial media, 35% yacho yaive yemasocial ads. Zvinofungidzirwa kuti kusvika 2017, huwandu uhu huchawedzera kusvika pamadhora gumi nemana emamiriyoni emadhora, nemagariro ekushambadzira anosanganisira 11% yemari. Mune ramangwana rinouya, 58% yemasangano, uye 66% yevatengesi, vakati ivo vangangodaro kana vangangoshandisa mari kushambadzira vemo muhafu yepiri yegore.
Muna 2014, vatengesi uye vamiririri vachange vachichinjisa mari yavo yekushambadzira kumahofisi enhau. Ruzhinji ruchange richiwedzera kushandisa mari kushambadziro, nhepfenyuro, uye kushambadzira kwedhijitari, nepo tambo, nhepfenyuro, magazini, uye mapepanhau emunyika vachiona kuderera kwakanyanya.
Phew, ndidzo dhata dzakakomba, eh? Neraki, LinkedIn inotyora aya manhamba uye fungidziro pasi mune anobatsira anoonekwa pazasi. Sezvo iwe urikugadzira uye kugadzirisa ako mabhajeti egore, ita shuwa yekutora aya mafungidziro uye matekiniki mukutarisa.
Tags: kushambadzaDatainfographicmobile advertisingYeMahara neThebhu KushambadziraChizvarwakushambadzira kwazvinokushambadzira munharaundaSocial Media Marketing
Gumiguru 30, 2017 pa 2:37 AM
Ndeapi masocial media mapurogiramu ari munyika?